Moowtal qafle ku dhacay wakiilkii ugu waynaa ciyaarta kubadda cagta & waxa ilaa haatan la og yahay | Hadalsame Media
Home Ciyaaraha Moowtal qafle ku dhacay wakiilkii ugu waynaa ciyaarta kubadda cagta & waxa...
Moowtal qafle ku dhacay wakiilkii ugu waynaa ciyaarta kubadda cagta & waxa ilaa haatan la og yahay
(Roma) 28 Abriil 2022 – Mino Raiola oo ahaa wakiilkii ugu saamaynta badnaa kubadda cagta ayaa si faj’o ah u geeriyoodey.
Warqaadka German-ka ah ee BILD ayaase qoraya in xaalkiisu uu ka ba’naa sidii loo malaynayey, tiiyoo isbitaalka laga saaray maalmo yar kaddib.
Raiola oo 54 jir ahaa ayaa u dhashay Talyaaniga balse wuxuu isagoo yar qoyskiisa ula guurey Netherlands isagoo markii hore turjubaan ka noqday ciyaaraha ilaa uu wakiil wayn oo dhib badan isu rogo.
Sanadkii 2020, Forbes ayaa qoray in hantida Raiola ay gaarayso $84.7m oo doollar isagoo la shaqaysanayey walaalkii Vincenzo.
Previous article”Waa ceeb inaan deeq ka qaadanno dalka dunida ugu faqrisan” – Dadka reer Uganda oo si yaab leh uga fal-celiyey kaalmo ay bixisay jaaliyadda Soomaalidu + Sawirro
Next article5 ishaaro oo waawayn oo ay dirayso guushii xalay ee Sheekh Aadan Madoobe